Filtrer les éléments par date : mardi, 31 décembre 2019
mardi, 31 décembre 2019 23:56
Mpiasam-panjakana: Hiakatra 13% ny karama
Anisany fanapahan-kevitra nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany nandritra ny lahateny nataony nanaovany jeritodika ny taona 2019 sy nanoritsoritany amin'ny ankapobeny ny taona 2020, ny hampakarana ho 13% ny karaman'ny mpiasam-panjakana.
mardi, 31 décembre 2019 18:54
Fifamoivoizana: Haverina ny "Police de la Route" sahanin’ny Polisim-pirenena
Nanome alalana ny hamerenana indray ny "Police de la Route" ho an`ireo polisy nasionaly ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, nandritra ny fivoriana natao omaly tao amin’ny Commissariat Central Tsaralalana, niaraha-nikatsaka vahaolana amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana sy ny fandriampahalemana.
Nanao fanambarana ny Polisim-pirenena fa « haverina tsy ho ela ny "Police de la Route" manerana ny Nosy.
mardi, 31 décembre 2019 18:42
Nouvelle-Zélande: Efa nisantatra ny taona vaovao 2020
Efa vaovao ny taona any Nouvelle-Zélande. Izy no firenena voalohany nisantatra ny taona 2020. Efa taom-baovao ihany koa any Aostralia sy Korea Atsimo amin'izao.
mardi, 31 décembre 2019 18:34
Fizahantany: Ny taona 2008 no maro mpizahatany vahiny tonga teto Madagasikara
Nahatratra 375 010 ny isan’ny mpizahatany vahiny tonga nitsidika an’i Madagasikara ny taona 2008. Tato anatin’ny 10 taona farany dia tamin’io 2008 io no maro indrindra ny mpizahatany vahiny tonga teto.
Tombanana manodidina ny 348 660 ny tamin’ity taona ity. 500 000 no tanjona amin’ny 2023.
mardi, 31 décembre 2019 15:34
Fifamoivoizana: Tapaka tanteraka ny lalam-pirenena faha-6
Miakatra ary difotry ny rano ny arabe sy ny tetezana eo anelanelan’Andranonakoho sy tetezan’i Besaboba, Distrikan’Ambilobe, Faritra DIANA noho ny rotsak’orana. Tapaka tanteraka ny fifamoivoizana. Miampita lakana na mandeha tongotra mitety tendrombohitra ny mpandeha miova fiara.
mardi, 31 décembre 2019 15:23
Tsena sy fifanakalozana: Hifarana amin’ity 31 desambra ity ny fampiasana ireo ravim-bola nivoaka ny taona 2003 sy 2004
Araka ny didim-panjakana noraisina nandritra ny Filan-kevitry ny Governemanta ny talata 26 novambra 2019 dia hifarana amin’ity 31 desambra 2019 ity ny fampiasana ireo ravim-bola 10 000 Ariary, 5 000 Ariary ary 2 000 Ariary izay navoakan’ny Banky Foiben’i Madagasikara araka ny didim-panjakana laharana faha 2003-781 natao ny 8 jolay 2003, sy ny ravim-bola 1 000 Ariary, 500 Ariary, 200 Ariary ary 100 Ariary, izay navoakan’ny Banky Foiben’i Madagasikara araka ny didim-panjakana laharana faha 2004-1040 natao ny 23 novambra 2004.
Tsy manan-kery intsony ireo ravim-bola voalaza ireo, manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara aorian'ity 31 desambra ity.
Azo atao manomboka ny 2 janoary 2020 ka hatramin’ny 31 desambra 2020 ny fanakalozana ireo ravim-bola ireo any amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara na any amin’ny banky tsotra na any amin’ny Tahirim-bolam-panjakana sy ny ratsa-mangaikany rehetra manerana ny Nosy.
Aorian’izay dia any amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara irery ihany no hahafahana manakalo azy ireo hatramin’ny 30 jona 2021.
mardi, 31 décembre 2019 15:15
Wawa Paris: "Ianareo sisa andrasana"
Izany no hafatra napetraky Wawa, "prince du Salegy", raha hiazo an'i Paris Rungis 47 rue des Solets 94150, tamin'ny limousine, izay nitondran'ny mpikarakara ny lanonana an'ity mpanan-kanto Malagasy malaza ity, ho fanaovam-belomana ny taona 2019, ka hiarabana ny taom-baovao 2020 anio alina 31 desambra.
Hafana tokoa ny fety satria dia ny tarika Wawa iray manontolo no ampiakatra motro ambiance, miaraka amin'ny Big MJ, Lico Kininike ary Rijade.
mardi, 31 décembre 2019 11:00
Taom-baovao 2020: Fiaingana vaovao
Fanao tokoa ny manamarika manokana ny fandraisana ny taona vaovao.
Raha ny marina dia fotoana napetraky ny tsirairay izy io hanamarihana fiaingana vaovao.
Satria tokoa raha amin'ny 12ora alina ny eo Madagasikara ka miaraka mihoraka ny rehetra hoe "tratra ny taona", dia mbola amin'ny 10 ora alina, tara roa ora ny any Paris, ary efa vita ka matory kosa ry zareo any Sydney, Hong Kong, Chine, ary ry zareo any Hawaï sy Polynésie no mihoraka farany, noho ny elanelan'ora misy eo amin'ny firenena.
Raha ny tantara dia i Jules César, amperora romanina no namorona ny taom-baovao ny 1 janoary, 46 taona talohan'i Kristy. Nankalazain'ny Romanina ihany koa io daty sy volana janoary io, ahatsiarovany an'i Janus, izay andriamanitr'izy ireo manana endrika roa, ny ilany mitodika any amin'ny ho avy, ary ny ilany mitodika ny lasa.
mardi, 31 décembre 2019 09:46
Mpampianatra ho mpiasam-panjakana: Vita ny « contrat » ho an’ireo mpampianatra 700 andiany voalohany
Ny solontenan’ireo mpiofana nanaraka fiofanana nandritrany roa taona mahery tamin’ireo CRINFP (Centre Régional de l'Institut National de Formation Pédagogique) manerana ny Nosy no nisantatra ireo mpampianatra horaisina ho mpiasam-panjakana. Vita ny alatsinainy 30 desambra ny « contrat » ho an’ireo andiany voalohany, izay miisa 700 amin’ireo 8.500 horaisina, ary handray ny asany avy hatrany izy ireo.
Fanambin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa ny hahavitan’ireo « Contrat » ambiny amin’io volana Janoary 2020 io.